दीनेश डीसीको प्रचारका कस्ता कस्ता तरिका ? « Mazzako Online
दीनेश डीसीको प्रचारका कस्ता कस्ता तरिका ?
संचारमाध्यमबाटै आएकाले पनि हुनसक्छ, निर्देशक दीनेश डीसी समाचारको भाषा वुझ्छन् । डीसीले समाचार कसरी मेकिङ गर्ने भन्ने पनि जानेका छन् । यही कारणले पनि हुनसक्छ, डीसीको समाचार मेकिङ अहिले उनीद्धारा निर्देशित फिल्म ‘फूलै फूलको मौसम तिमीलाई’मा लागू भैरहेको छ ।
डीसीले आज मिडियालाई बोलाएर एउटा कार्यक्रम गरे । कार्यक्रमको उद्देश्य थियो गीतकार रत्नशमशेर थापालाई सम्मान गर्ने । ‘फूलै फूलको मौसम तिमीलाई’ नाम डीसीले रत्नशमशेर थापाले कोरेका फूलै फूलको मौसम तिमीलाईबाट लिएका थिए ।
यसैले पनि डीसीले थापालाइ सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रममा थापाले ‘फूलै फूलको मौसम तिमीलाई’को गीत कसरी लेखिएको थियो भनेर विवेचना गरे ।
फागुन २१ गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो फिल्मका लागि डीसीले विभिन्न कार्यक्रममा प्रचार गरिरहेका छन् । समाचार मेकिङमा सिपालु डीसीले प्रचारका लागि गीतकारलाई सम्मान राखेका थिए । धादिङको एक गाउँमा तुइन विस्थापित गरि झोलुङ्गे पुल बनाउने अभियानमा डीसी लागेका छन् ।
जसका लागि यो चलचित्रको सम्पूर्ण नाफा पुल बनाउन लगाउने योजना डीसीको छ । यसका लागि नेपालका विभिन्न १९ वटा रेडियोले उनको यो अभियानमा साथ पनि दिने भएका छन् ।